ISITOFU SOKUFAKA ISITJHUMBO
IMIKHIQIZO YOKWENZA AMAKHASIMENDE
UKUFAKWA KOMKHIQIZO WESIKHATHI, UMBALA ..
Kutholakalela umkhiqizo wakho, sizovula isikhunta esikhethekile sokukhiqizwa kwe-OEM.
ingenziwa ngezifiso ngokuya ngamasampula owanikezayo
ingenziwa ngezifiso ngokobukhulu obunikezayo
ungasebenzisa ibhokisi lakho lokupakisha elingaphandle, umkhiqizo wangaphakathi kimi ukuqedela umkhiqizo
KUNGANI KHETHA QINGDAO GUANYU OEM UKUCUBHA
2.Imboni yeplastikhi ineminyaka engama-20 yesipiliyoni sokukhiqiza
Inkampani inedumela elihle futhi ivikela isithombe sakho somkhiqizo ngezinga elikhulu kakhulu.
Iqembu elisezingeni eliphakeme lokuklama elinesikhathi sokusebenza esilinganiselwe seminyaka engaphezu kwengu-7 linikeza ukusekelwa kwezobuchwepheshe.
5.Can ukukunikeza Logistics nezokuthutha izixazululo elula kakhulu, futhi ahlinzeke service ukuthunga
6.Kukhona isethi ephelele yohlelo oluqinile lokulawula ikhwalithi kusuka ezintweni zokusetshenziswa zepulasitiki kuya kwimikhiqizo eqediwe. Iphakheji yasekuqaleni i-Exxon Mobil PP polyethylene isetshenziswa njengempahla eluhlaza, nesikhathi esifushane sokujikeleza nokusebenza kahle kokukhiqiza, okufeza ukulinganisela okuhle phakathi kokuqina komkhiqizo nokumelana nomthelela.
Iqembu labasebenzi abanekhono elineminyaka engaphezu kwengu-3 lesipiliyoni lingathuthukisa ukusebenza kahle kokukhiqiza futhi lilondoloze izinto zokusetshenziswa ukunciphisa izindleko. 8. Kungenziwa egcizelele ahlukahlukene screen ukuphrinta, lettering, thermoprint Ilogo
* Ngakho-ke lapho udinga ithuluzi elenziwe ngomshini lokukhiqiza ingxenye yepulasitiki kepha awunazo izinsiza zokulikhiqiza, sicela uxhumane nathi. Noma ngabe udinga ukuklanywa noma ukulungele ukukhiqizwa, sinezinsizakalo ezigcwele zokunikela.
IQEMBU ELIKHULU LE-R & D
wn iqembu lochwepheshe lonjiniyela nabaqambi, abebengenza ukubumba ngokwezifiso ukuhlangabezana nezidingo ezithile futhi baqhubeke beklama imikhiqizo emisha ngokuqhubekayo.
UKWAZI KWEMINYAKA ENGAPHEZULU KWAMA-20
Kusukela ngo-1997, sinikezela ngezinsizakalo ze-OEM kumakhasimende emazweni angama-60, njenge-Akro-Mils, Grainger, Amazon, njll. Iningi lemikhiqizo ye-OEM ithola amalungelo obunikazi.
Kukhona ochwepheshe aba-5 abaguquliwe elabhorethri.
Ikhwalithi yinani lethu eliyinhloko. Kusukela ezintweni zokusetshenziswa kuze kube sekupheleni kokukhiqizwa, sesisebenzise uhlelo lokulawula ikhwalithi oluqinile kakhulu. Iqoqo ngalinye lemikhiqizo lizosampulwa ilebhu. Zonke izinqubo zokukhiqiza nezindlela zokuhlola zenziwa ngokuya ngemikhuba yezimboni namazinga wamazwe omhlaba.
Imigqomo Yokugoqa Ngeplastiki, Ukubeka Imigqomo Yokuthatha, Imigqomo Yokugcina Isitoreji, Imigqomo Yesitoreji Esinqwabekile, Imigqomo Yesitoreji Esibekiwe Epulasitiki, Isitaki nama-Hang Bins,